Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii 22aad Ee Jaaliyaadka Ogadenia oo Maalintiisii 2aad Galay.
Shirwaynihii 22aad Ee Jaaliyaadka Ogadenia oo Maalintiisii 2aad Galay.
Posted by Dulmane	/ August 5, 2017
Waxaa si habsami ah magaalada Frankfurt ee dalka Germany uga socda shirkii Jaaliyadaha Soomaalida Ogadenia ee Aduunka, waxaana shirkan kasoo qayb galay wufuud aad ubadan oo kakala timid shanta qaaradood ee aduunka.
Shirkan oo galay maalintiisii 2aad ayaa si wanaagsan lagusoo xidhay maalintiisii 1aad waxaana maalintii koobaad ee shirka khubad mug iyo miisaan leh laga dhagaystay Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xxoraynta Ogadenia Adm. Maxamed Cumar Cismaan.
Sidoo kale waxaa kulanka saaka lagu daah furay aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah iyadoo bulshadii kulanka soo xaadirtay laxasuusiyay cabsida Allaah iyo waajibaadka muslimiinta saaran.
Intaas kadib waxaa khudbad dheer shirka kufuray gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee wadanka Germany, gudoomiyaha ayaa ugu horaynba umahad celiyay wufuuda shirka kasoo qayb gashay isagoo xusay in Jaaliyada martida looyahay ee Germany ay ku faraxsantahay marti galinta shirka Jaaliyaadka S.ogadenia ee aduunka.
Sidoo kale waxaa shirka maanta kusoo biiray xubnaha Jaaliyada wadanka Jarmalka oo dhan wuxuuna jawiga shirku umuuqdaa mid aad udagan una qurux badan.
Intaas kadib ajandaha uguwayn ee maanta laga doodi doono ayaa ah soobandhigida waxqabadkii Jaaliyaadka ee sanadkii tagay, waxaana warbixinadaas siwaafi ah usoo bandhigi doona gudoomiye yaasha Jaaliyadaha ee shirka sooxaadiray.
Dhinaca kale waxaan goobta kamaqnayn koox faneedyada Jaaliyaadka oo maanta ilaa shalay bulshada usoo bandhigayay suugaan kala duwan oo hadba jawiga shirka badalaysay.